Canadian Grade 12 Diploma [OSSD] – Crown Education
Ontario Secondary School Diploma (OSSD) ဆိုတာဘာလဲ . . .
OSSD ဆိုတာ ကနေဒါနိုင်ငံ Ontario ပြည်နယ်မှအထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို ထုတ်ပေးသည့် ဒီပလိုမာ လက်မှတ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလက်မှတ်ကို ကနေဒါနိုင်ငံ Ontario, Ministry of Education မှတိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများလေ့လာသင်ယူနိုင်ရန် CROWN EDUCATION & ROYAL ACADEMIC INSTITUTE တို့မှ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့ကြီးများတွင် အဆိုပါဒီပလိုမာကို သင်ကြားပို့ချ ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံတွင် OSSD လက်မှတ်ရရှိရန် အထက်တန်းကျောင်းများတွင် (၉) တန်းမှ (၁၂) တန်းအတွင်း Credit 30 သင်ယူ ရရှိရန်လိုအပ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သင်ကြားပေးမည့် Canadian High School Diploma (OSSD) ရရှိရန်အတွက်အနည်းဆုံး6Courses သို့မဟုတ်7Courses သင်ကြားရန်လိုအပ်သည်။
အချိန်တစ်နှစ်အတွင်း OSSD ပြီးမြောက်ရန်နှင့် Credit မည်မျှထပ်မံယူရမည်ကိုသိရှိနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ ဆယ်တန်း အောင်လက်မှတ် သို့မဟုတ် iGCSE/ GCE A-LEVEL ရမှတ်များကို ကနေဒါ နိုင်ငံ တွင် Prior Learning Assessment Recognition (PLAR) စနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်လိုအပ်သည့်ဘာသာရပ်များ/ Credit များကို CROWN EDUCATION & ROYAL ACADEMIC INSTITUTE မှ သင်ကြားပေးပါမည်။
OSSD လက်မှတ်ရရှိပြီးပါက ကနေဒါနိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်များသာမကပဲ၊ သြစတြေးလျ၊ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ စင်္ကာပူအစိုးရတက္ကသိုလ်များသို့ပါ လျှောက်ထားနိုင်​ပါသည်။
Ontario Secondary School Diploma ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်
OSSD ကို Credit Course များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသဖြင့်၊ လျှောက်ထားမည့်ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီအလိုက် Admission ကိုစဉ်းစားပေးပါသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် OSSD ကို iGCSE အနည်းဆုံး (၅)ဘာသာဖြေဆိုထားသူများ၊ မြန်မာဆယ်တန်း စနစ်ဟောင်းအောင်မြင်ထားသူများ၊ မြန်မာစနစ်သစ် (၁၁)တန်းနှင့်ညီမျှသူများလျှောက်ထားနိုင်သည်။
iGCSE မဖြေဆိုရသေးသူများ Sec-3/Sec-4 မှတ်တမ်းများဖြင့်လည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ သင်ယူရမည့် Credit Course အရေ အတွက်ကွဲပြားနိုင်သည်။
10 hours of community service လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
(ယခုအခါ Covid-19 ကြောင့်အဆိုပါ Test ကိုဖြေဆိုရန်မလိုအပ်ပါ။)
If student failed or didn’t getachance to take OSSLT, they are required to take
STUDENT WILL GET ONTARIO EDUCATION NUMBER (OEN)
Ontario Student Record (OSR) – Will be Kept in Toronto Office
OSSD နဲ့ ဆေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်များ
မြန်မာနိုင်ငံ CROWN-RAI တွင် OSSD ပြင်ဆင်ပြီး UK, Poland, Hungary နိုင်ငံများတွင် MBBS, Dentistry, Pharmacy ဘွဲ့များအတွက် တက္ကသိုလ်သို့တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
အင်္ဂလန်ဆေးတ္ကသိုလ်များသို့လည်းတိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်ပြီး OSSD ပြင်ဆင်ရာတွင် ဆယ်လသာကြာမြင့်နိုင်သည့်အတွက် GCE A ပြင်ဆင်သည့် (၂) နှစ်အချိန်ထက်များစွာအချိန်ကုန်သက်သာနိုင်သည်။
UK ဆေးတက္ကသိုလ်များတွင်ကုန်ကျစရိတ်များသော်လည်း၊ Hungary, Poland နိုင်ငံများတွင် တစ်နှစ် US$ 8000 မှ US$ 16000 သာကုန်ကျနိုင်သည်။ နေထိုင်စားသောက်စရိတ်မှာလည်းအဆိုပါနိုင်ငံများတွင် တစ်လ US$ 300 မှ US$ 500 အတွင်းသာကုန်ကျသည်။
Australia, USA, Canada နိုင်ငံများတွင်လည်း PreMedicine Degree များဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်သည်။
ကျောင်းသူ/သား၏နောက်ခံပညာရေးမှတ်တမ်းနှင့်တက္ကသိုလ်တွင်ဆက်လက်သင်ယူရန်စိတ်ဝင်စားသော ဘာသာရပ်/ မေဂျာပေါ်တွင်မူ တည်၍ အောက်ပါ ဘာသာရပ်တွေကိုရွေးချယ်သင်ယူနိုင်သည်။
Students will be able to select from the following study streams grouping of courses depending on their post-secondary program/area of interest:
4. Canadian Politics
6. Elective course
3. Calculus & Vectors
Math, Business, & Computer Science Stream
Health & Science Stream
4. Mathematics of Data Management
Sept 2022 [ Application Deadline : July 2022]
January 2023 [ Application Deadline : November 2022]
Ontario Secondary School Diploma ဝင်ခွင့်လက်ခံပေးသည့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်အချို့
OSSD is recognized as admission requirement
Western University ELC
Waterloo University – Renison University College
Blue Mountains Inernational Hotel School
UTCC iSM Thailand (The University of Newcastle Australia)
Flinder International Study Center
Australian National University College 77-96
University of Connecticut(UCAELI)
University of Pennsylvania(ELP)
NUS – School of Continuing and Lifelong Education (SCALE)
National University of Singapore (NUS) – Engineering
National University of Singapore (NUS) – Computing
National University of Singapore (NUS) – Law
National University of Singapore (NUS) – Arts and Social Sciences
Holland International Study
WHY PURSUE THE OSSD [ CANADIAN HIGH SCHOOL DIPLOMA]?
Receiveaglobally recognized Canadian credential, the OSSD.
Qualify to apply to post-secondary undergraduate degree programs around the world (UK, US, Australia, Canada, New Zealand, Singapore).
Receivea3-year work permit upon graduation to live and work in Canada (if studying inaCanadian university)